Cyclone | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့) / Cyclone
July 18, 2009 Jitki Cyclone Myanmar Artist Unreleased Albums2Comments
G-Tone (O-B-O KingBeatz)
G-Tone songs DJ Burma From O-B-O KingBeatz NewSong_Beef Download Link Mediafire Link Ifile.it Link
June 10, 2009 mmhiphop အဆိုတော် (အဖွဲ့) Cyclone Myanmar Artist Unreleased Albums3Comments
Yangon – YGN
၀၁။ ခဏလောက်တော့နားထောင်ကြည့်ပါ – Theory+NO ၀၂။ အတ္တ – Cyclone ၀၃။ မပြောင်းလဲခြင်း – Cyclone ၀၄။ မသိပါနဲ့တော့ – KooK ၀၅။ တောင်းဆိုခြင်း – ကျော်ဝဏ္ဏ ၀၆။ ရာစုသစ် – Theory+ဗေဒါ ၀၇။ ငါ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး – Theory ၀၈။ အခုမိုးချုပ်ပြီ – Cyclone ၀၉။ မုန်းချင်မုန်းလိုက် – KooK ၁၀။ ဆင်းသက်ခြင်း – ကျော်ဝဏ္ဏ ၁၁။ င်္သခါရ – ဗေဒါ
March 31, 2009 saiagag အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) Cyclone KooK Myanmar Artist No Theory 1 Comment
Hip Hop သင်္ကြန်ရောက်ပြီ
၁။ သင်္ကြန်ရောက်ပြီ – OnTrack ၂။ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ – Cyclone ၃။ ငါတို့ကသာတယ်- 9mm ၄။ ဒီနှစ်သင်္ကြန် – ကောင်းချစ်စိုး ၅။ သင်္ကြန်ယိမ်း – J Me ၆။ ပျော်ကြပျော်ကြ – K Cash ၇။ ချမ်းနေမှာဆိုးလို့ – 9mm ၈။ အားလုံးအတွက်သင်္ကြပွဲ – Cyclone ၉။ မပျော်နိုင်တဲ့သင်္ကြန် – OnTrack
March 5, 2009 mmsong 9mm အခွေ (အများ) သင်္ကြန်သီချင်းများ Cyclone K-cash Ontrack3Comments
Cyclone – Gtone
01. Next-Gerention.(95) G-Tone – Ft; BobbySoxer 02. Beware. G-Tone – Ft; Bigg-Y`N`PyiThar 03. $treetKingz. Yatha_G-Tone_KyatPha 04. Club. G-Tone – LinBin
February 2, 2009 သတ္တမ အဆိုတော် (အဖွဲ့) Cyclone Unreleased Albums3Comments
Cyclone – Sample
၁။ အသစ်ကပြန်စ ၂။ အိမ်မက် ၃။ ငါတို့ကိုမုန်းပြီလား ၄။ Cyclone ည
January 2, 2009 saiagag အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) Cyclone Myanmar Artist Unreleased Albums3Comments
၁။ ပန်းတိုင်သို့ ၂။ လုပ်ချင်ရာလုပ် ၃။ မိုက်ကရိုဖုန်း ၄။ အေးဆေးပဲ ၅။ သတိထားပါ ၆။ ရန်ကုန်မြို့မှကြိုဆိုပါ၏ ၇။ ကုန်ပါပြီ ၈။ ဟစ်ဟော့တော့ရှိသေးတယ် ၉။ မင်းမကြိုက်တဲ့ဟစ်ဟော့ ၁၀။ ၂၄နာရီ ၇ ရက်
February 19, 2008 mmsong အခွေ (အများ) ချစ်စိုး Cyclone J-Me K-cash Ontrack3Comments